Horumar la’aanta muuqata hogaankeena u horseed ah | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Horumar la’aanta muuqata hogaankeena u horseed ah
Horumar la’aanta muuqata hogaankeena u horseed ah
Marka laqiimeeeyo xaaladda uu dalku mariyo doorashadii ladoortay Madaxweyne Farmaajo kadib dalkeena wuxuu galay marxalado aad u adag iyadoo marna aan layska indhatiri karin xaaladda uu dalkeenu marayo.
Waxaa marag madoonta ah in aan lasamayn wax horumar ah oo lataaban karo dhankasta marka loo fiiriyo. Dalkeena waxa uu soo maray bur burkii kadib doowlado badan oo ubadnaa Kmg iyadoo doowlad waliba ay kusoo shaqaysay marxalado aad u adkaa.
Waxaan marqaati kanahay in dowladihii soomaray dalka ay aad uga culeeys badnaayeen doowladda maanta jirta iyagoo lakumay dhibaatooyin iyo is’aamin darro aad ugu baahsanayd dhamaan dalka oo idil. Dowladda maanta jirta ayaa heshay fursaddii ugu weyneyd taasoo ah in aysan jirin cid ishortaag gacan kahadal ah aanay kusamayn karin marka laga reebo kooxaha argagixisada oo dhamaan laga wada simanyahay in laga wada hortago. Hannaanka iyo qorsha siyaadeed aan dhamaystirnayn ayaa waxa uu sabab unoqday dowladda maanta jirta in hay’ad waliba ee dalka kajirta uu ka muuqdo isdhax’yaac iyo habacsanaan aanan marna laheyn sidii loo heli lahaa xalkeeda.
Madaxda doowladda ayaa marwaliba ku cel celiya waxaa ka shaqayn la’nahay kooxo qaswada yaal ah taasoo iyadana kabaxsan anshaxa iyo doowlad wanaaga looga fadhiyay in ay madaxda nagu hagaan. Dalka waxaa kusoo kordhay doorashadii kadib musuq maasuq baahsan oo aan mid qarsoodi ah ahayn iyadoo la’abuuray dhallinyaro laga dhaadhiciyay in dowladdu tahay mid ugaar ah taasoo iyadana ah mushkilad dalka kusoo korortay. Halkaa haynoo joogto qeeybtii kowaad.